Daryeelka Degdegga ah ee Quicksand: Sidaan ku gaadhnay halkan - Cunnooyinka Taayirada
Daryeelka Daryeelka ee 'Quicksand': Sideen Halkaan ugu nimid
Sababtoo ah Cuntada Lugaha Laydhka ayaa ah ilo lagu qiimeeyo daryeel bixiyeyaasha, waxaan higsaneynaa inaan bixinno macluumaad ay daryeel-bixiyeyaashu u arki karaan inay faa'iido leeyihiin. Kani waa kii ugu horreeyay ee taxane mararka qaarkood loo yaqaan "Daryeelka Daryeelka ee Quicksand," fiirin shaqsi ahaaneed oo ku saabsan inuu noqdo daryeel bixiye ay sameysay Agaasimaha Suuqgeynta Lauren Edstrom.
Muddooyinkii dambe marka wada hadalka taleefanka iga tago aniga oo ka niyad jabsan ka qanacsanaanta, waxaan isku dayaa inaan xasuusto hooyaday, markii aan hooyaday ahaa.
Subax kasta waxay lahaan jirtay qaab isku mid ah, u diyaargarowga maalintaasna waxay ahayd farshaxan. Waxay had iyo jeer sameyn jirtay timaheeda, waxayna si gaar ah uga hadlaysay isku qurxinteeda. Waxaan xasuustaa inay u sameysay qurxiyo aan wax ku qurxiyo, qaar ka mid ah asxaabteyduna waxay iga codsadeen inay iyadu sameyso. Waan ka xishooday markaa, maxaa yeelay waxaan ka walwalayay inaysan jeclaan doonin waxa ay sameysay, laakiin dabcan way sameeyeen.
Hooyaday si fudud ayey saaxiibo u sameysatay. Qof kastaa wuu ka helay iyada. Had iyo jeer waa la iiga mahadcelin jiray sida ay u macaanayd.
Waalidiinteyda waxay is fureen aniga oo sideed jir ah, markii aan ka baxnay guriga oo aan u guurnay guri ku yaal xaafad kale oo magaalada ka mid ah, adduunyadaydu way sii weynaatay isla mar ahaantaana isku mar. Waan ogaa inay i daryeeli doonto, laakiin qeyb aniga iga mid ah ayaa bilaabay inay iyadu iyada raadiso.
Ma aanan haysan lacag badan. Daawashada iyada oo ilmada iyo xishoodka ka celineysa dukaanka raashinka markii ay ku bixisay shaambadeeda cuntada ayaa iga dhigtay inaanan waligey weydiisan waxyaabaha ay carruurta badankood u badan tahay inay sameeyaan marka ay u dukaameysanayaan. Waxay aaday koleej waxayna ku guuleysatay inay ka qalin jabiso Magna Cum Laude welina waxay ii qaadataa barashada dabaasha habeen kasta.
Dhamaan asxaabteyda dugsiga sare waxay ugu yeereen "nun" maxaa yeelay marwalba waxaan haystay bandowga ugu horeeya waligeyna ma tagi karo xafladaha dadka kale oo dhan. Waxba kama wada qaban jirin waxyaabaha ay gabdhaha kale la sameeyeen hooyooyinkood. Waxaan aadnay filimada. Mararka qaar wax baa u dukaameysi tagi jirnay laakiin wax badan oo naga dhexeeye ma jirin taasna way sii caddaatay markii aan sii weynaaday.
Markii aan dhammeeyey kulliyadda, waxay u egtahay sidii hooyaday u ogaatay inaanan mar dambe u baahnayn, inkasta oo aan u baahday. Waxay bilawday inay kala furfurto waxa aan ogahay hada inay yihiin dhacdooyin taxane ah oo naxdin leh oo ay soo martay nolosheeda oo dhan. Waxay sameysay waxaan ugu yeeray go'aano aan macquul ahayn oo horseeday in xaaladdeeda dhaqaale ay noqoto mid xun. Waxaan is arkay aniga oo shaqeeya wakhti buuxa oo aan hubiyo inay haysato cunto iyo hoy, dhammaan anigoo hubinaya inaan isku mid ahay. Waxay isku dayday inay wax ka qabato, laakiin sidoo kale waxay lahayd sababo badan oo fursadaha qaarkood aysan ugu shaqeyn karin iyada. Waxay heshay jeexdin u shaqeysa sidii dabeyl, maxaa yeelay mar kale, qof walba wuu jecel yahay waxayna noqotay mid ka mid ah waqtiyada ugu badan ee laga codsado hay'addan.
Dhawr sano ka dib qalin jabintaydii waxaan aaday Kalifoorniya muddo toddobaad ah, markii aan ku soo noqdayna albaabka ayay ka jabisay oo tidhi "Hadda ha is xoqin." Markii ay albaabka ka furtay waxay yeelatay il weyn oo madow, oo maqaarkeeduna uu nabar yahay. Waxay ku dhacday socod. Way kacday oo madaxeedu wuxuu ku dhacay dariiqa. Waxay sheegtay in nin dhalinyaro ah uu caawiyey oo uu dib ugu celiyey gurigeeda, sababtoo ah way dhiig baxaysay kuna wareersan tahay wixii dhacay. Waxay u tagtay dhakhtarka, laakiin waxay dhaheen way fiicnaan lahayd oo gurigeeda ayay u direen. Raajo malahan, majiro imtixaan dhaawac madaxa ah, kaliya inay fiicnaan laheyd.
Ma ahayn ilaa dhawr sano ka dib waxaan ogaaday inay si aad ah ugu sii yaraaneeyso sidii hooyadii aan ku soo koray. Iyadu ma daryeesho nafteeda, waxaa ka buuxay welwel, oo way illowday - laakiin ma jiraan wax aad u cabsi leh. Afar sano ka dib dhicitaankeedii, ma seexan. Waan guursanayay oo iyadu kuma lug lahyn ama umuuqatay mid danaynaysa qorshaha arooska gabi ahaanba. Waxaan bilaabay inaan ka fikiro inay wax runti khaldan yihiin, laakiin way beenisay oo si muuqata ayay u xanaaqday markasta oo aan isku dayo inaan soo bandhigo.
Waxyar kadib arooska, waxaan udhaqaajinay inay noodhawaato waxayna umuuqatay xamaasad iyo walwal iyo hubin la'aan. Waxay lahayd saaxiibo, iyo jadwal joogto ah oo guriga ka dhaca waxayna ku noolayd aqalkaas muddo 20 sano ah. Meesheeda cusubi waxay ahayd mid nabdoon, ka cusub, ka nadaafad badan uguna dhow qoyska. Laakiin tan ugu muhiimsan waxay ahayd mid iyada ku cusub. Way murugootay laakiin ma aysan ogeyn. Way ilawday wax badan, laakiin ma aysan qiran. Waxaan aakhirkii ku qanciyay inay aragto dhakhtar oo ay qaado tijaabada neuro-psych si meesha looga saaro cudurka Alzheimers.
Welwelka ay ka qabtay imtixaankan ayaa ahaa mid cirka sare, natiijaduna waxay muujineysaa, maqalka erayga 'dementia' ma ahayn wax ay aqbali doonto. Hooyaday wax walba sabab ayey u leedahay; Waxaan ugu yeeraa cudurdaar, iyaduna waxay ugu yeertaa sababo. Iyadu waa sayid ah ereyada iyo dhacdooyinka wareegaya. Iyadu ma aqbali doonto tan, iyo sida ay uga walwalsan tahay dhab ahaan ma aysan soo bandhigin calaamadaha hore ee waallida. Waxaa loo diray dhakhtar cilmu-nafsi ah si ay uga shaqeyso arrimaha walaaca qaarkood, ka dibna waxaa la faray inay tijaabiso tijaabada markale sanad gudihiis. Way diiday.
Maalin kasta waxaan wacaa isla waqtigaas markaan ka soo laabto shaqada. Waxaan hubiyaa inay aragto wiil ay ayeeyo u tahay, oo ay fursad u hesho inay waqti la qaadato reerka ninkayga, laakiin ma sii dhexgeli karto dadka kale. Ma taqaano sida loo sheekaysto. Waxay u egtahay inaysan iyadu xasuusan sida ay taasi u shaqeyso. Way dhoolla caddaynaysaa oo edeb bay leedahay laakiin halkaas uun bay joogtaa; runti maahan HALKAN.
Waxyar ka hor intuusan wiilkeeyga dhalan waxay bilawday inay ila hadasho sidii inaan qof kale ahay waxayna iisoo gudbisay qofka saddexaad. Taasi waxay ku sii badatay hawl maalmeedkeenna caadiga ah. Markay i soo wacdo, waxay weydiisataa inay la hadasho gabadheeda. Mar dambe uma tagi karto ballamaha dhakhtar iyada kaligeed, mana xamili karto mid ka mid ah dhaqaalaheeda. Tan iyo markii aan bilaabay inaan waxbadan ka caawiyo waxqabadyada maalinlaha ah waxay dhahdaa waxyaabo sida "markii aan lahadlayo ninka xafiiska jooga" ama "gabadha kale ee iga caawisa dhanka bangiyada" ama "caruurta ayaa igu caawinaya taas" . ” Dhamaan dadkaasi waa aniga, aniga kaliya.
Hooyaday waxay leedahay walaac daran, waxayna la shaqaysaa dad kooban oo isku dayaya inay ka caawiyaan arimaheeda iyo dhibaatooyinka xusuusta, laakiin cidina ma sharixi karto sababta ay iigu aragto qof kale ama dad kale. Xitaa waxay iigu yeertaa hooyadeed. Way is daryeeshaa. Waxay rajeyneysaa Cunnadeeda Wheels-ka waxayna isku karsataa seddex shay oo isku mid ah cashada habeen kasta. Way kaxaysan kartaa baabuurka waxayna tagi kartaa bakhaarka iyo gurigeyga waxayna raacdaa safarro saaxiibadeed, laakiin ma garanayo cidda aan iyada u ahay. Markii aan waydiiyo way beenisaa oo way qososhaa waxayna igu dhahdaa "dabcan waan ogahay inaad tahay gabadhayda."
Waa dareen la yaab leh in aanan la helin ogaanshaha cudurka, ama sabab ay noloshaydu ugu beddeshay sidii ay ahayd. Waxyaalahaas awgood, way adag tahay in lala heshiiyo dareenka ah sidii aan u waayey hooyaday inkasta oo ay weli halkan joogto. Waxaan u baahanahay inaan ogaado inay jiraan dad kale oo halkaas jooga oo wadaagaya dareeno lamid ah. Waxaan u maleynayaa inay tahay sababta aan u rabay inaan ku bilaabo boggan. Waxaan noqday daryeel bixiye 28. Ma lihi culeys aan la wadaago walaalaha. Hooyaday waa sideed caruur ah. Waxay leedahay abti iyo adeer oo aanan weligay la kulmin. Maalmaha qaar wax baan siin jiray si aan ugu tiirsanaado qaraabadeyda, laakiin waxaan kaliya qoys ku nahay warqad.
Balooggan waxaa loogu talagalay dhammaan dadka aan lahayn saaxiib kuu aqoonsan kara. Boggan waxaa loogu talagalay wiilal iyo gabdho, asxaabta iyo qoysaska maalin uun qaadanaya, kuna shaqeeya shidaalka kaliya ee ay haystaan - jacayl. Haddii aad halkaas ka joogtid, oo aad u garatid mid ka mid ah shucuurtayda aan la garan karin sida cunug keliya ama daryeel bixiye ama qof uun, ku soo noqo booqashada degelkan. Waan sii wadi doonaa inaan la wadaago tusaalooyinka nolosha dhabta ah, halganka iyo daqiiqadaha iftiinka, iyo waliba kheyraadka aan helay inay yihiin kuwa waxtar badan leh.
Qoraalkan waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay bogga gaarka ah ee Lauren, afamilyonpaper.
29 Abriil, 2016